Governemanta – AFD- UE : laharam-pahamehana ny fanajariana sy ny fanofanana | NewsMada
Governemanta – AFD- UE : laharam-pahamehana ny fanajariana sy ny fanofanana
Nifanaraka ny AFD (Agence française de développement) sy ny fitondram-panjakana malagasy, omaly, fa misy famatsiam-bola avy amin-dry zareo vahiny ho an’ny tetikasa roa lehibe ho fampandrosoana ny toekarena sy ny sosialy : voalohany, fanajariana ny tanànan’Antananarivo, toy ny lalankely (tetikasa fahatelo). Faharoa, tahiry ho an’ny fanofanana mpiasa.
Hevitra avy amin’ny governemanta ny momba ny lalankely ary nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny AFD hatramin’ny 2012. Betsaka ny fokontany nahitana fiovana nanaovana ireny asa ireny, nisy 40 km, niampy paompin-drano, fanasan-damba, toeram-pivoahana. Betsaka ny efa vita ka namaha olana maro eny anivon’ny fiarahamonina fa maro ihany koa ny mbola fangatahan’ny mponina amin’ity tetikasa iarahana amin’ny Frantsay, ny AFD izany, sy ny Vondrona eoropeanina (UE) ity. Ny lalankely tetikasa fahatelo, mitentina 102 miliara Ar (26 tapitrisa euros) ka avy amin’ny AFD ny 75 miliara Ar, ny 11 miliara Ar, fanomezan’ny UE, ary ny 16 miliara Ar, avy amin’ny fanjakana malagasy.
Tahiry ho an’ny fanofanana
Famatsiam-bola iray kosa atao ho an’ny Tahiry malagasy momba ny fanofanana matihanina, niainga avy amin’ny fifampidinihan’ny Gem, Fivmpama, CTM ary ny fanjakana, izay handraisan’ny minisitera telo anjara : Asa sy Fanofanana ; Indostria sy ny sehatra tsy miankina ; Fitantanambola sy ny tetibola.
Tsy maintsy mandoa latsakemboka ho an’io tahiry io ny orinasa rehetra ho fanatsarana ny fampandehanana ny toekarena. Mandray anjara izany ny orinasa ho fanofanana ireo mpiasa ao aminy. Manome fiofanana ho an’ireo tanora vao mitady asa koa, na ireo manana andraikitra nefa tsy ahitana fivoarana mihitsy ny fitaovana ampiasainy. 24 miliara Ar ny atokan’ny AFD ho an’izany tahiry izany. Midika ho fahombiazan’ny orinasa amina sehatra misy azy ny fitomboan’ny fahaizan’ny mpiasa. Tambin’izay, fampakarana ny fari-piainan’ny mpiasa.